1:54 AM သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ 1 comment
8:15 AM ဟိုဟို ဒီဒီ 1 comment
4:59 AM ပုံပြင်ထဲကကျွန်မတို့တွေ6comments
3:06 AM ပုံပြင်ထဲကကျွန်မတို့တွေ 1 comment
4:11 PM ပုံပြင်ထဲကကျွန်မတို့တွေ3comments
ရွာတစ်ရွာမှာ မိုင်းတူးသမားလေးတစ်ယောက်ရှိရောတဲ့၊ သူ့မှာ မိဘတွေကမရှိကြတော့ဘူး၊ အဖွားနဲ့ပဲ နေတယ်တဲ့၊ (ဘာလို့မိဘတွေမရှိတော့တာလည်း မမေးတော့ပါဘူး၊ ပုံပြင်ရှေ့ကိုမရောက်မှာစိုးလို့) အဖွားနဲ့ မိုင်းသမားလေးက သိပ်ပြီး ဆင်းရဲကြတယ်၊ သူတို့ရဲ့ အိမ်ဆိုတာကလည်း လုံလုံခြုံခြုံကြီးမဟုတ်ဘူး၊ အဲဒီရွာလေးမှာ နေနေကျမို့လိုသာပဲ၊ မိုင်းသမားလေးက တစ်နေကုန် အိမ်နဲ့ ခပ်ဝေးဝေး မိုင်းတွင်းကိုသွားရပြီး ညနေမိုးစုပ်စုပ်ချုပ်မှ အိမ်ကိုပြန်ရတယ်၊ မိုင်းသမားလေးက ဆင်းရဲလွန်းလှပေမဲ့ အင်မတန်ရိုးသားတယ်၊ အဖွားကိုလည်း သိပ်ချစ်ရှာတာ၊ အဖွားကလည်း မြေးလေးကို သိပ်ဂရုစိုက်တာပဲ၊ မိုင်းတူးသမားလေးမှာ သူ့လိုပဲ ပိုက်ဆံမရှိပဲ ရိုးသားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့လည်း ချစ်ကြိုက်နေသတဲ့၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့က လက်မထပ်နိုင်ကြသေးဘူး၊ နေစရာကလည်းအဆင်မပြေကြဘူး၊ ငါတို့တွေ ပိုက်ဆံစုကြဦးစိုရဲ့လို့ နှစ်ဦးသား သဘောတူ ပိုက်ဆံစုနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့၊ တစ်နေ့တော့ မိုင်းသမားလေး မိုင်းတွင်းအလုပ်မှာ ရှိနေတဲ့အချိန် အဖွားက အိမ်မှာဆုံးပါးသွားရော၊ အဖွားရှိနေတုန်းကတော့ အိမ်နီးချင်းတွေက သိနေတော့ ဘာမှမလုပ်ကြပေမဲ့ အဖွားလည်း အသက်မရှိတော့ဘူးလည်းဆိုရော၊ အိမ်နီးချင်းတွေက ရှိသမျှပစ္စည်းတွေ အကုန်သယ်မကုန်ကြတယ်၊ မိုင်းသမားလေးလည်း ညမိုးချုပ်အလုပ်ပြီးလို့ အိမ်လည်းပြန်လာပါလေရော .. အိမ်မှာ ပစ္စည်းတွေ ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး အဖွားကလည်း အိပ်ယာလေးထဲမှာ အသက်ပျောက်နေရှာပြီ၊ မိုင်းသမားလေးက ပူဆွေးသောကရောက်ပြီး ငိုကြွေးမိပေမဲ့ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်ဆိုရမှန်းလည်း မသိတော့ဘူးတဲ့၊ အိမ်နီးချင်းတွေကလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်နေကြတယ်၊ နောက်ဆုံး အဖွားရဲ့ ခေါင်းအုံးအောက်က ငှက်တောင်လေး ၃ တောင်ကိုတွေ့သတဲ့၊ အဖွားကိုသိပ်ချစ်တော့ အဖွား အမြတ်တနိုးသိမ်းထားတဲ့ ငှက်တောင်လေးတွေကို မိုင်းတူးသမားလေးက တယုတယကိုင်တွယ်ပြီး သူ့ရဲ့ ဦးထုပ်လေးထဲ ထိုးစိုက်ထားလိုက်တယ်၊ ပြီးတော့ အဖွားကို ကောင်းမွန်စွာ သဂြိုဟ်ရတာပေါ့၊ အစကတည်းက ဆင်းရဲလွန်းတဲ့မိုင်းသမားလေးခမြာ ခုဆို ဘာတစ်ခုမှကို မရှိတော့တဲ့ဘ၀မှာ သူ့ရဲ့ချစ်တဲ့သူလေးနဲ့ လက်ထပ်ရဖို့လည်းဝေးရပြီ ဆိုပြီး အဲ့ဒီအတွက်လည်း ၀မ်းနည်းနေခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့လည်း ရိုးသားကြိုးစားလိုတဲ့ လူငယ်လေးက နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ပူဆွေးသောကတွေမေ့ဖျောက်ပြီး မနက်စောစောထ၊ အလုပ်သွားဖို့ ပြင်ရတော့တာပေါ့၊ အလုပ်ကိုပုံမှန်သွားခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ညနေအလုပ်ပြီးတော့ စိတ်ထွေထွေဖြစ်နေတဲ့ လူငယ်လေးက အမြဲသွားနေကျလမ်းကိုမှားပြီး လမ်းစပျောက် တောနက်ထဲ ရောက်သွားတယ်၊ ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့ မိုင်းတွင်းနားမှာ စုန်းမလိုလို၊ နတ်သမီးတွေလိုလိုနေတဲ့ နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်၊ ညမိုးချုပ်ပြီးဆို အဲဒီဘက်ကို ဘယ်သူမှမသွားရဲကြဘူး၊ မီးရောင်တွေတလက်လက်နဲ့ သရဲတစ္စေတွေမြူးကြတယ်ဆိုပဲ၊ ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပေါ့၊ အခုတော့ မိုင်းတူးသမားလေးက လမ်းမှားရင်း အဲဒီနေရာဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ကြီးရောက်သွားတာတဲ့၊ ရောက်လည်းရောက်တယ် ဆိုတာနဲ့ အင်မတန်မွှေးပျံ့သင်းကြိုင်ပြီး ချောမောလှပတဲ့ မိန်းမပျိုလေးက စွေ့ကနဲ၊ လူငယ်လေး အနားကို ဘယ်က ဘယ်လို ရောက်လာလိုက်မှန်းမသိ ရောက်လာတယ်၊ လူငယ်လေးကို ကြည့်ပြီး “ငါ .. မလှဘူးလားကွဲ့” လို့ မေးတယ်၊ လူငယ်လေးကလည်း မွန်မွန်ရည်ရည်ပြန်ဖြေရတာပေါ့၊ ကြောက်တာကိုး ဘာမှန်းမသိ၊ ညာမှန်းမသိနဲ့၊ “လှတာပေါ့ဗျာ၊ ခင်ဗျား .. အင်မတန်ချောမောလှပပါပေတယ်” လို့ လူငယ်လေးကဖြေတယ်၊ မိန်းမပျိုလေးကထပ်မေးတယ်၊ “ကောင်လေးရေ .. ဒါဆို .. ငါ့ကို လက်ထပ်ပါလားကွဲ့၊ ငါ .. သိပ်လှတယ်ဆို၊ မင်း.. ကြိုက်ရဲ့မဟုတ်လား” လို့ တစ်ဆင့်တက်ပြီး မြူဆွယ်တယ်တဲ့၊ ကောင်လေးက ဖြေရပြန်တယ်၊ “အလိုဗျာ .. ခင်ဗျား လှတော့လှလွန်းပါရဲ့၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ မအပ်စပ်ဘူး၊ ကျွန်တော့်မှာ အသက်လောက်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေး၊ လက်ထပ်ချင်တဲ့ မိန်းကလေးရှိပြီးသားပါဗျာ၊ တစ်ခြားသူကို ရွေးချည်ပါ” လို့ လူငယ်လေးက တောင်းပန်တယ်၊ မိန်းမပျိုလေးက စိတ်နည်းနည်းဆိုးလာပြီ လှပချောမွေ့လှတဲ့ ရုပ်ကလေးကလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖြစ်လာတယ်တဲ့၊ “ဒါဆို .. မင်း .. လူတိုင်းလူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ အဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာတွေတော့ မင်း လိုချင်ရဲ့ မဟုတ်လား၊ ရော့ .. ယူပါကွဲ့ .. ယူပါကွဲ့” ဆိုပြီး တဖြတ်ဖြတ်လက်နေတဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာတွေ မိုင်းသမားလေးရဲ့ ကုတ်အကျီအိပ်ကပ်တွေထဲ အတင်း ထိုးသိပ် ထည့်ပေးတယ်တဲ့၊ လူငယ်လေးက ခေါင်းခါခါ ခြေခါခါနဲ့ “မယူပါရစေနဲ့” လို့ အကြိမ်ကြိမ်ပြောရင်း ငြင်းတာပေါ့၊ နောက်တော့ ရတနာတွေ အိပ်ကပ်တွေထဲ အပြည့်အသိပ်ထည့်ပြီးရော လူငယ်လေးလည်း နေရာကမရွှေ့နိုင်၊ မပြေးနိုင်ဖြစ်တော့မှ .. “ကဲ .. ကောင်လေး .. လာခဲ့၊ ငါ့ကိုလည်း မယူ၊ ရတနာတွေလည်း မယူ၊ ငါကတော့ မင်း .. အသွေးအသား ယူရမှာပဲကွဲ့” ဆိုပြီး သူ့ပါးစပ်ကြီးဖြဲပြီး အစွယ်ကြီးနှစ်ချောင်းကို ထုတ်လိုက်တယ်၊ ချောချောလှလှ မိန်းမပျိုလေးကနေ ကြောက်စရာလန့်စရာ စုန်းမကြီးအသွင်ပြောင်းသွားပြီ၊ လူငယ်လေးကို ဂုတ်ချိုးပြီး သွေးစုတ်မယ်လည်းပြင်ရော၊ လူငယ်လေးဦးထုပ်က အဖွားရဲ့ငှက်တောင်လေးသုံးချောင်းက စုန်းမကြီးရဲ့ နှာခေါင်းထဲကို ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့ ကလိမိတာပေါ့၊ အဲဒီမှာ စုန်းမကြီးလည်း “ဟတ်ချိုး၊ ဟတ်ချိုး” အတောမသတ်နိုင်အောင်ချေရင်း “အလိုလေး ဘယ်နှယ်ဟာပါလိမ့်” လို့ အော်ဟစ်ပြီး ကြောက်လန့်တကြား ထွက်ပြေးတယ်တဲ့၊ စုန်းမကြီးထင်လိုက်တာက၊ လူငယ်လေးတော့ ငါ့ကို လက်နက်ဆန်းတစ်မျိုးနဲ့ ခုခံလိုက်ပြီလို့ ထင်သွားရှာတာကိုး၊ တစ်ချိုးတည်း ပြေးရော၊ ဒါပေမဲ့ လူငယ်လေးရဲ့ အိတ်ကပ်ထဲမတော့ အဖိုးတန်ရတနာတွေ ရှိတုန်းပဲ၊ ဒါနဲ့ လူငယ်လေးလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ အိမ်ကိုပြန်ပြေးခဲ့တယ်။
နောက်နေ့ မိုးလဲလင်းရော .. မိုင်းသမားလေးက သူ့ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးကို ရတနာတွေပြပြီး ရောင်းချကြသတဲ့၊ လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ခြမ်းပြီး လက်ထပ်လိုက်ကြတယ်၊ ချက်ချင်း သူတို့ ချမ်းသာသွားကြတာကို မြင်တွေ့တော့ အိမ်နီးချင်းတစ်ယောက်က လာပြီး စပ်စုမေးမြန်းတယ်၊ “ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ပိုက်ဆံတွေရလာသလဲ” လို့ အဲဒီလူက စပ်စုတယ်၊ လူငယ်လေးက ရှိုးသားတာကိုး၊ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းပဲပြောလိုက်ပါတယ်၊ ဒါနဲ့ အဲဒီ အိမ်နီးချင်းက ငါလည်းပဲ ရတနာရအောင်ကြံမယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လမ်း မပျောက် ပျောက်အောင်လုပ်၊ တမင်တကာကို အဲဒီစုန်းမကြီးရှိတဲ့နေရာ စွတ်တိုးသွားခဲ့တယ်၊ နောက်တော့ စုန်းမကြီးနေရာလည်းရောက်ရော .. မေးနေကျအတိုင်းမေးတာပဲတဲ့၊ လူငယ်လေးကပြောပြထားရဲ့နဲ့၊ အဲဒီအိမ်နီးချင်းက စုန်းမကြီးအလှမှာ ယစ်မူးပြီး “ငါ .. လှသလားကွဲ့” လို့ လဲ မေးရော “အိုး .. လှလိုက်တာမှ၊ တသက်နဲ့ တကိုယ်ဒီလိုချောမောလှပတာ မတွေ့ဖူးပါဘူး” လို့ ချွဲချွဲပြစ်ပြစ်ပြောလိုက်တာပေါ့၊ “ဒါဖြင့်ရင် .. ငါ့ ကို လက်ထပ်ခိုင်းရင် လက်ထပ်မယ်ပေါ့” လို့ စုန်းမကြီးက ထပ်မေးတယ်၊ အဲဒီလူက ချက်ခြင်းပဲ ဦးခေါင်းကျိုးမတတ် ခေါင်းကို သွက်သွက်ငြိမ့်ရင်း “လက်ထပ်ပါ့မယ်၊ လက်ထပ်ပါ့မယ်” လို့ အမောတကောဖြေတယ်တဲ့၊ “အဖိုးတန် ကျောက်သံပတ္တမြားတွေကော ယူချင်သေးလားကွဲ့” လို့ မေးလည်းမေးရော၊ သူအသင့်ယူလာတဲ့ အိပ်အကြီးကြီးတစ်လုံးကို ပေးပြီး “ယူချင်ပါရဲ့ဗျာ၊ ဟောဒီမှာ အိပ်အကြီးကြီးတောင် ယူလာပါရဲ့၊ အကောင်းဆုံးရတနာတွေသာ ရွေးပြီး ထည့်ချည်ပါ” လို့ ပြောပြီး အိတ်ကိုလှမ်းပေးတယ်တဲ့၊ စုန်းမကြီးလည်း ကျောက်သံပတ္တမြားတွေ အိတ်နဲ့ အပြည့်ထည့်ပေးတဲ့ အပြင်၊ သူ့ အကျီအိတ်ကပ်ထဲပါ ထည့်ပေးတော့တာကိုး၊ လောဘကြီးတဲ့ အိမ်နီးချင်းလည်း “ထည့်ပါ .. ထည့်ပါ၊ များများသာထည့်ပါ” ပြောနေရင်းနဲ့ပဲ၊ ရတနာတွေက လေးလံလွန်းတော့ လှုပ်လို့ မရတော့ဘူး၊ အဲဒီတော့မှ စုန်းမကြီးက အစွယ်ကြီးနှစ်ချောင်းနဲ့ အဲဒီလူရဲ့ လည်ပင်းကို ထိုးစိုက်ပြီး သွေးစုပ်တော့တယ်။
လောဘကြီးတဲ့သူများ ဒရက်ကူလာသွေးစုပ်တာခံရပြီး သေရှာတာပါပဲ၊ အခု ကျွန်မအသက်အရွယ်နဲ့ဆိုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကလို မကြောက်တတ်တော့တဲ့အပြင် နဲရှောပြောတဲ့ လောဘကြီးတဲ့ အိမ်နီးချင်းပုံစံက သိပ်ရယ်ရလွန်းတော့ ကျွန်မဖြင့် ရယ်လိုက်ရတာ၊ နဲရှောက ပိုဆိုးပါသေးတယ်၊ သူပဲပြော၊ သူက ဦးအောင်ရယ်နေခဲ့သေးတာ။
4:09 PM ပုံပြင်ထဲကကျွန်မတို့တွေ No comments
3:48 PM ပုံပြင်ထဲကကျွန်မတို့တွေ3comments
3:39 PM ပုံပြင်ထဲကကျွန်မတို့တွေ No comments
“နှမမုံ့ရောင်း မောင်မုံ့ထောင်း။ ကြေးဖလားလေးဆောင်း” တဲ့၊ အဲဒီလို မေမေက သီချင်းလေးလို ရွတ်ပြတတ်သေးတယ်၊ ဟိုး .. ရှေးရှေးတုံးက ရွာတရွာမှာ အဖိုး အဖွား ဇနီးမောင်နှံ ၂ ယောက် ရှိကြတယ်၊ သူတို့ မှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မောင်နီဆိုတဲ့ သားတစ်ယောက်နဲ့ မစီဆိုတဲ့ သမီးတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်၊ တစ်နေ့မှာ မမျှော်လင့်ပဲဇနီးဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်၊ ကလေး ၂ယောက်နဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့ရာမှာ အလုပ်အကျွေးပြုစုမယ့် သူလိုနေတာကြောင့် နောက်အိမ်ထောင် ထူထောင်လိုက်ပါရော ကွယ်၊ နောက်မိန်းမက ကလေးနှစ်ယောက်ကို မကြည်ဖြူနိုင်ပါဘူး .. တဲ့၊ အမြဲပဲ တကျီကျီနဲ့၊ တောထဲ သွားစွန့်ပစ်ဖို့ ဆူဆူပူပူလုပ်လိုက်၊ ချော့ချော့မော့မော့ ပြောလိုက်နဲ့ တိုက်တွန်ုး နားသွင်းနေလေ့ရှိတယ်၊ အဲဒါနဲ့ အဖိုးလည်း စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ခလေးနှစ်ယောက်ကို လှည့်ဖျားခေါ်သွားပြီး ... တောထဲရောက်တော့ “သားတို့သမီးတို့ဒီမှာ နားနေကြအုံး .. ခဏနေရင် လာခေါ်မယ်” ဆိုပြီး သူ့မိန်းမရှိရာ အိမ်ကို ပြန်ပြေးပါလေရော၊ မိုးချုပ်ခါနီးတဲ့ တိုင်အောင် လာမခေါ်တော့ မောင်လုပ်သူက ကြောက်လာတာပေါ့၊ အမလုပ်တဲ့သူက မောင်လေးကို အားပေးနှစ်သိမ့်ရင်း တစတစနဲ့စမ်းတ၀ါးဝါး အပြန်လမ်းကို ရှာဖွေ ပြန်ပြေးလာကြတဲ့အခါ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အလာတုံးက မောင်ငယ်လေး ၀ါးပြီး ထွေးပစ်ခဲ့တဲ့ ကြံဖတ်တွေကို ကြည့် .. ပြန်လာနိုင်လို့မှောင်ရီဝိုးတ၀ါးအချိန်မှာပဲ အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ကြတယ်၊ အိမ်ရောက်ပေမဲ့ သူတို့ခမြာ အခြေအနေကိုကြည့်ပြီး အိမ်ပေါ်မတက်ရဲကြဘူး၊ အဖိုးနဲ့ နောက်မိန်းမက ထမင်းတွေ မြိန်ရေ ယှက်ရေနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီးစားနေကြတယ်လေ၊ ကြမ်းပေါက်ကနေ ကျလာတဲ့ ထမင်းစေ့လေးတွေကို အငမ်းမရ ဆာဆာနဲ့ နှစ်ယောက်သားအလုအယက် ကောက် .. ကောက် စားကြတယ်၊ အဖိုးကလည်း ကလေးနှစ်ယောက် အိမ်အောက်မှာ ပြန်ရောက်နေမှန်းလည်းသိရော ထမင်းတွေပိုပိုပြီး ပစ်ချပေးတယ်တဲ့၊ နောက်တော့ အဖွားက “အဖိုးကြီး .. ရှင် ဒီနေ့ တော်တော်အစားကြီးတာပဲ၊ ထမင်းတွေစားလိုက်တာ၊ ဟော တစ်လုပ်၊ ဟောတစ်လုပ်နဲ့” လို့ ဆူတယ်၊ နောက်တော့ ကလေးတွေကို ချကျွေးနေမှန်းလည်း အဲဒီနောက်မိန်းမက သိရော၊ ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲတော့တာပေါ့၊ အဖိုးကလည်း တောင်းပန်ရှာတယ်၊ “ကွယ် .. ကလေးတွေ သနားစရာပါ၊ ငါ မပြစ်ရက်ဘူးကွယ်၊ မပစ်ပါရစေနဲ့တော့” လို့ အမျိုးမျိုးတောင်းပန်ရှာတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ နောက်မိန်းမကလဲ မလျော့ဘူး၊ ထပ်ပြီး တောနက်နက်ထဲ သွားပစ်ဖို့ ခိုင်းစေပြန်တယ်၊ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ အဖိုးကြီးက လူလယ်ကျသွားပီလေ၊ ပြန်မလာနိုင်အောင် တောကြီးမျက်မဲထဲကို၊ ဟိုကွေ့ ဒီပတ်နဲ့ မှတ်လို့ မရအောင်၊ တောအနက်တကာ့ အနက်ထဲ ခေါ်သွားတော့တယ်။
3:29 PM ပုံပြင်ထဲကကျွန်မတို့တွေ No comments
နောက်ပြကွက်တစ်ခု (၂) အကလွန်တဲ့မောင်နှမ စားပွဲပေါ်က နွားနို့အိုးကို ၀င်တိုက်မိပါရော၊ ဘာပြော
ကောင်းမလဲ၊ ဗြန်းကနဲ ကွဲတော့တာပဲ၊ သူတို့ အမေက အပ်ချုပ်နေရာက နို့အိုးလဲကွဲတာ မြင်ရော အရမ်းဒေါသထွက်ပြီး စိတ်ဆိုးလွန်းလို့ “ထွက်သွား ငါ မမြင်ချင်ဘူး၊ ထင်းကောက်ခဲ့ကြ၊ တစ်ယောက်တစ်စည်းရမှ အိမ်ပြန်လာခဲ့” ဆိုပြီး ဒါဏ်ပေးတာပေါ့။
ပြကွက်(၃) တောနက်ထဲမှာ ကလေးတွေ မျက်စိသူငယ် နားသူငယ်နဲ့ထင်းခြောက်တွေ စုနေကြတယ်၊ မောင်လေးက “မမရေ မောင်လေးတို့ .. ထင်းတွေ ပွေ့ပိုက်အိမ်ပြန်ရင်တောင် မေမေက စိတ်ဆိူးပြေပါ့မလားဟင်၊ နွားနို့ မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ မေမေ ဘာနဲ့မုံ့ဖုတ်မလဲ၊ မောင်လေးတို့ ဘာစားရမလဲ မသိဘူးနော်” နဲ့တတွတ်တွတ် ပြောနေရှာတာပေါ့၊ အစ်မလုပ်သူကတော့ ထင်းတွေကိုသာ သဲကြီးမဲကြီး ကောက်နေရှာတယ်။
ပြကွက် (၄) မှာတော့ ကလေးနှစ်ယောက် တောထဲမှာ လမ်းပျောက်ပြီး အိမ်မပြန်နိုင်ပဲ တလယ်လယ်ဖြစ်နေတဲ့အခန်းပေါ့၊
ပြကွက်(၅) မောင်နှစ်မနှစ်ယောက် မှောင်မိုက်နေတဲ့ညကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းရမလဲ မသိပေမဲ့ ဘုရားဝတ်ပြုဆုတောင်းဘို့ကိုတော့ မမေ့ကြပါဘူး၊ “မောင်လေးရေ .. မမတို့ ဘုရားရှိခိုးကြမယ် ကောင်းကင်တမန်တွေကိုလဲ စောင့်ရှောက်ပေးဘို့ ဆုတောင်းကြရအောင်” လို့ အမဖြစ်သူက တိုက်တွန်းတယ် ။ ဆုတောင်းပြီးတော့ နှယောက်သား တဦးကိုတဦး တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တွယ်ဖက်ရင်း သစ်ပင်ခြေရင်းမှာပဲ မောမောပမ်းပမ်း နားနေ အိပ်စက်ကြတယ်၊ အိပ်မက်ထဲမှာတော့ angel ခေါ်တဲ့ နတ်တမန်လေးတွေဟာ ဟိုဟို ဒီဒီ ပျံဝဲရင်း ကလေးနှစ်ယောက်ကို စောင့်ရှောက်နေကြပါတယ်၊ သစ်ရွက်ကလေးတွေ အများကြီး ကလေးတွေ ကိုယ်ပေါ် ခြွေချပြီး အအေးဒါဏ်ကာကွယ်ဖို့ ခြုံစောင်သဖွယ် ဖုံးလွှမ်းပေးနေပါတယ်၊ တစ်ညလုံးလိုလို အနီးအနားမှာပဲ ပျံဝဲ စောင့်ရှောက် ပေးနေတြတာပါ၊ ကလေးနှစ်ယောက်ဟာ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့အိပ်လို့ ကောင်းနေကြတာမို့ မနက်မိုးလင်းလို့ မျက်နှာကိုနေရောင်ထိုးမှပဲ နိုးလာကြတယ်။ ညက အိပ်မက်ထဲမှာ ကောင်းကင်တမန် နတ်ကလေးတွေ ပျံဝဲစောင့်ရှောက် ပေးနေကြတယ်လို့ အိပ်မက်မက်တဲ့အကြောင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန်ပြောပြကြရင်း စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ ပျော်ရွှင်နေကြတာပေါ့၊
ပြကွက် (၆) မှာတော့ သူတို့နှစ်ဦး ထင်းရှာရင်း အလွန်လှပတဲ့ ရောင်စုံအိမ်ကလေးတလုံးကို တွေ့မြင်လိုက်ကြတယ်၊ သစ်ပင်ခြုံနွယ်တွေက လေအဝှေ့ တစ္ဆေညည်းတွားသံလိုလို ကြားရပြန်တော့ မောင်ငယ်လေးက ပိုကြောက်တာပေါ့၊ ပြီးတော့ ရောင်စုံအိမ်ကလေးက လှလဲလှ၊ မွှေးလဲမွှေးတာကြောင့် ရှေ့ကိုတိုးလို့ တိုးလို့စူစမ်းကြတယ်၊ ထူးဆန်းတဲ့ အိမ်လေးလျှို့ဝှက် သွေးဆောင်နေတာကြောင့် ဟန်ဆဲလ်လေး က စိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ အပြေးကလေးသွားလို့ အိမ်ခေါင်မိုးလေး တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖဲ့စားလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ..
Little mouse ! Little mouse !
Who is eating my house ?
ကြွက်ကလေး၊ ကြွက်ကလေး ငါ့အိမ်ကို ဘယ်သူဖဲ့စားနေသလဲ ---
ဆိုတဲ့အသံ က သစ်ရွက်ကြို သစ်ရွက်ကြားက လေတိုးသံနဲ့အတူ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်၊ မောင်လေးက
“ဟော.. ဘာသံလဲ .. မမရေ” တဲ့၊ မောင်လေးကမေးတော့ မမဂရဲတဲလ် က မောင်ငယ်လေးကို နှစ်သိမ့်တယ်၊
“ဘာသံမို့လဲ မောင်လေးရဲ့.. မမဖြင့် မကြားပါဘူး” လို့ မသိကျိုးကျွံပြုလိုက်တယ်၊ မောင်လေးလဲ အတင့်ရဲပြီး နောက်ထပ် မုံ့အိမ်လေးက မုံ့တစ်ဖဲ့ ချိုးစားပြန်ပါရော၊ မုံ့ လည်းစားလိုက်ရော .. စောစော က အသံက ပေါ်လာပြန်တာပေါ့၊
ဒီတစ်ခါတော့ အသံတင်မကတော့ဘူး၊ ရုပ်ပါ ပေါ်လာတယ်ကွဲ့၊ နှာတံကောက်ကောက်၊ နှဖူးမောက်မောက်၊ မျက်တွင်းဟောက်ဟောက်နဲ့ စုန်းမအိုကြီး တယောက် တောင်ဝှေးကြီး တဒေါက်ဒေါက်ထောက်ပြီး ပေါ်လာတော့တာပေါ့။
စုန်းမကြီးက “လာစမ်း.. ကောင်ကလေး၊ နင် ငါ့အိမ်ကိုစားပစ်လို့ ငါလဲ နင့်ကိုပြန်စားရမယ် ဟီး ..ဟီး” တဲ့လေ..။
စုန်းမအိုကြီးက မောင်ငယ်လေးကို ကြိုးတချောင်းနဲ့ချည်နှောင်ထားတယ်၊ အစ်မကိုတော့ ရေနွေးအိုး မီးထိုးခိုင်းတယ်လေ၊ မောင်ငယ်လေးကို ရေနွေးအိုးထဲထည့်ပြီး ကိတ်မုံ့ဖုတ်စားဖို့ပေါ့၊ ရေနွေးအိုးတယ်လို့ အတန်ကြာတော့ စုန်းမအိုကြီးက ရေနွေးပွက်ပလားလို့မမ ဂရဲတဲလ်ကို အကြည့်ခိုင်းတာပေါ့၊ ဥာဏ်သွားတဲ့ ဂရဲတဲလ်လေးက “ဖွားဖွားရယ် ကျွန်မအရပ်က ပုပုကလေးရယ်..၊ ဘယ်မှာ ရေနွေးအိုးကြီးကို ကြည့်လို့ရပါ့မလဲ၊ ဖွားဖွား ကြည့်လိုက်လေ” လို့ချိုချိုသာသာလေး နဲ့ ပြုံးပြုံးလေး ကနွဲ့ကယလေး ပြောတာကိုး၊ ဒီတော့ စုန်းမအိုကြီးက နားဝင်သွားပြီး ကိုယ်တိုင် အိုးကြီးနားသွားပြီး ငုံ့ကြည့်သတဲ့၊ အိုးကြီးက လူတစ်ကိုယ်လုံးမြုပ်သွားအောင် ကြီးတာကိုးကွဲ့၊
လား .. လား၊ ဒီတော့ မမ ဂရဲတဲလ်လေးက ဘာပြောကောင်းမလဲ၊ တစ်ခါတည်း ပြေးလာပြီး စုန်းမအိုကြီးရဲ့ခြေထောက် နှစ်ချောင်းအသာမ၊ အိုးထဲ ထည့်ချပြစ်လိုက်တာ .. အိုးကြီးထဲ ဇောက်ထိုးမိုးမျှော် ဦးခေါင်းစိုက်ကျပါလေရောတဲ့၊ စုန်းမကြီးပေါ့။
ဟန်ဆဲလ်လေးလဲ မမဂရဲတဲလ်က နွယ်ကြိုးကြီးဖြည်ပေးလို့လွတ်မြောက်သွားတာပေါ့၊ ရေနွေးအိုးကြီးထဲ ကျသွားတဲ့ စုန်းမအိုကြီးကိုယ်က အခိုးအငွေ့တွေ လွင့်ပျံလာလိုက်တာ ပိန်းပိတ်အောင် မှောင်ကျသွားသတဲ့၊ အမြင်ရှင်းကြည်လင်လာတဲ့အခါမှာတော့ အိုးကြီးရော စုန်းမကြီးရော မုံ့အိမ်လေးရော မရှိတော့ဘူး၊ အဲဒီနေရာမှာ စိုပြည်လန်းဆန်းတဲ့ သစ်ပင်ပန်းမန်တွေနဲ့လှနေသတဲ့၊ ဒါနဲ့ မောင်နှစ်မ နှစ်ယောက်လဲ အိမ်ပြန်ချင်လှပြီလေ၊ ဗိုက်တွေလဲ ဆာလှပေါ့၊ သနားပါတယ်၊ သူတို့အမေ့ကို မျက်နှာလုပ်ဖို့ ထင်းတွေ အမြန်စုကောက်ကြတာပေါ့၊
ဒီအခါမှာ ဟိုး အဝေးကနေ.. ဟန်ဆဲလ်ရေ .. ဂရဲတဲလ်ရေ နဲ့ တကြော်ကြော် အော်ခေါ်ရှာဖွေနေတဲ့ အဖေ အမေတွေရဲ့အသံကို ကြားလိုက်ရတယ်၊ အဲဒီအခါမှာတော့ ပြဇာတ်တိုလေးရဲ့ဇတ်သိမ်းပိုင်းကလေးပေါ့၊ သူတို့ မိဘတွေနဲ့ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းတွေ့ဆုံပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါးကခုန်လို့ကိတ်မုံ့တွေစားလို့ .. ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေသွားကြသတဲ့ ကွဲ့၊ ပုံပြင်ကလေးကတော့ ...အဲ .. ဟုတ်ပေါင် ပြဇာတ်ကလေးကတော့ ဒါပါပဲတဲ့ကွယ် လို့ အဲဒီလိုပြောပြီး မေမေက စနောက်ခဲ့သေးတယ်၊။
ဟန်ဆန်လ်၊ ဂရဲတဲလ်ပုံပြင်လေးနားထောင်ခဲ့ရတုန်းက စိတ်ကူးနဲ့ ကိတ်မုန့်အိမ်လေးမှန်းဆကြည့်ပြီး စားချင်စိတ်တွေတဖွားဖွား ပေါ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲဒီအခါ စိတ်ထဲ ပုံဖော်ထားတဲ့ စုန်းမကြီး၊ ခါးကိုင်းကိုင်း၊ တောင်ဝှေးကြီးနဲ့၊ သူ့ရဲ့ပုံစံကြီးမျက်လုံးထဲပေါ်လာရော၊ ကိတ်မုန့်အိမ်လေးစားချင်စိတ်လေး တစ်ခါတည်းပြေးပါလေရော၊ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အဲဒီလို ကိတ်မုန့်အိမ်မျိုး တောထဲမှာ တကယ်ရှိနိုင်တယ် ထင်ခဲ့မိတာပဲ၊ အင်တာနက်ဆိုတာလည်း မသိခဲ့သေး၊ အင်တာနက်မှာလည်း မရှာနိုင်ခဲ့၊ စိတ်ကူးနဲ့ ကိတ်မုန့်အိမ်လေး ပုံဖော်ကြည့်ရတာအမောပေါ့၊ နောက်တော့ မေမေ့ဆီမှာ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေအကုန်ပါတဲ့အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကြီးတစ်အုပ် ရောက်လာတယ်၊ တကယ်က အင်္ကျီပုံစံတွေကြည့်ချင်လို့ပါ၊ မေမေက အကျီလည်းချုပ်တတ်တယ်၊ အနောက်တိုင်းဂါဝန်ပုံလှလှလေးတွေ သမီးတွေ ချုပ်ပေးချင်တော့ အဲဒီစာအုပ်ကြီးဝယ်လာတာတဲ့၊ ဘယ်က၀ယ်လာလဲတော့ မသိပါဘူး၊ အဲဒီ အင်္ဂလိပ်စာအုပ်ထူကြီးရလာတဲ့နေ့က ပုံလှလှလေးတွေကြည့်ပြီး ထမင်းဟင်းမေ့ ပျော်နေခဲ့တာ မှတ်မိပါသေးရဲ့၊ စာရွက်တွေ တစ်ရွက်ချင်း တစ်ရွက်ချင်း ... သေချာလှန်ကြည့်နေရင်း တစ်နေရာရောက်တော့ ကိတ်မုန့်အိမ်ပုံလေးတွေ့လိုက်ရတယ်၊ အိုး ပျော်လိုက်တာ၊ အနားမှာလည်း အဖွားအိုကြီးတစ်ယောက်ပုံ၊ ပြီးတော့ ကလေးလေး ၂ ယောက်ပုံလည်းတွေ့တယ်၊ သေချာပြီပေါ့၊ ဒါ ဟန်ဆဲလ်နဲ့ ဂရဲတဲလ်ပဲ၊ မေမေ့ကို ချက်ချင်းပြေးပြီးမေးမိခဲ့တယ်၊ “မေမေရေ ဒါ ဟန်ဆဲလ်နဲ့ ဂရဲတဲလ်လား၊ ဒါကရော ကိတ်မုန့်အိမ်လေးလား၊ ဟုတ်လားမေမေ” လို့ မေးခဲ့တယ်၊ မေမေ က “အိုး .. ဟုတ်ပါရဲ့ .. ဒါလေးက ဟဲန်ဆဲလ်လေးပေါ့၊ သူက ဂရဲတဲလ်လေး၊ ဒါ စုန်းမကြီးပေါ့၊ မေမေပြောတဲ့စုန်းမကြီးပုံစံနဲ့ တူရဲ့လား” လို့ မေမေက ပြန်မေးတယ်၊ ကျွန်မကတော့ “သိပ်တူတာပဲပေါ့၊ စာအုပ်ထဲမှာတော့ သမီးထင်ထားတာထက် အရပ်ကပုနေတယ်” လို့ ပြန်နောက်မိတယ်၊ စာအုပ်ကြီးထဲမှာက ကတွန်းရုပ်ပုံစံလေးတွေကိုး၊ မေမေပုံပြောတိုင်း ကိတ်မုန့်ဖုတ်တယ် ဆိုတာ ကြားရရင်လည်း သိပ်စိတ်ဝင်စားတာပဲ၊ ကျွန်မတို့ကကိတ်မုန့်ဆိုတာ ဆိုင်က၀ယ်စားကြတဲ့လူမျိုးတွေကိုး၊ ကိုယ်တိုင်မှ ကိတ်မုန့်ဖုတ်လေ့မရှိတာပဲနော်။
3:13 PM ပုံပြင်ထဲကကျွန်မတို့တွေ No comments
3:10 PM ပုံပြင်ထဲကကျွန်မတို့တွေ No comments
3:48 PM ပင်ကိုရေးဆောင်းပါး, တော်လှန်ရေးသမား၊ အကြမ်းဖက်သမား .. ဘယ်လိုကွာခြား7comments
အခြားတစ်ဖက်မှာဆိုရင် တော်လှန်ရေးသမားတစ်ဦးကလည်း လူတွေကို သူခံယူထားတဲ့ သဘောထားအတိုင်း လက်ခံလာအောင် ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာပါပဲ၊ ဒါပေမဲ့ အကြမ်းဖက်တဲ့နည်းမပါပါဘူး၊ အားကိုမသုံးပါဘူး၊ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့် ဆင်ခြင်ပိုင်းဖြတ်မှု၊ ယုံကြည်ချက်ပြင်းပြမှု၊ ရိုးသားမှု၊ ဒါတွေကိုပဲ အားအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်၊ လူတွေရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးစားရာမှာ အင်အားမသုံးပဲ လူတွေကို သူတို့ရဲ့ပြုမူ ဆောင်ရွက်မှု၊ အတွေးအခေါ်တွေ ကိုယ်တိုင်နားလည်သဘောပေါက်လာစေပြီး ပြောင်းလဲဖို့ပဲကြိုးစားပါတယ်။
အကြမ်းဖက်သမားကတော့ လူတွေကို သတ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖျက်ဆီးခြင်းက သူလိုချင်တာကိုရဖို့ လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်နည်းလမ်းလို့ ယုံကြည်ထားတယ်၊ သူ့ရဲ့ဝါဒနဲ့သွေဖီသူတွေကို နားလည်လက်ခံလာအောင် ကြိုးစားဖို့ထက် ရှင်းလင်းပစ်လိုက်တာကပဲ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလို့ သူယုံကြည်တယ်၊ တော်လှန်ရေးသမားက အခြားတစ်ဖက်ကပါ၊ လူတွေကိုသတ်ဖြတ်တာကို ဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းလို့ သူမယုံကြည်ဘူး၊ ဖျက်ဆီး/သတ်ဖြတ် အဲဒီနည်းလမ်းတွေမှာ ဘယ်တော့မှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုပါဘူး။
အဲဒီအချက်အလက်တွေကြည့်ပြီး အကြမ်းဖက်သမားဟာ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုမြောက်တဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ လူတွေကို သွေးဆောင် တယ်၊ လူတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်၊ တော်လှန်ရေးသမားက ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားရာမှာ သွေးဆောင်ဖို့ သူ စိတ်မ၀င်စားဘူး၊ သူကိုယ်တိုင်ပဲ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုတယ်ဆိုတာ သိသာမြင်သာစေပါတယ်။
အကြမ်းဖက်သမားဟာ မိမိကိုယ်တိုင် တကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်လည်း ဆုံးဖြတ်တတ်ပါသေးတယ်၊ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေသူလို့ ကိုယ်တိုင်ပဲတံဆိပ်တပ်လိုက်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူပြောင်းလဲလိုတဲ့ ကမ္ဘာကြီးက သူနဲ့ နေသားတကျဖြစ်မဲ့၊ သူ့စိတ်ကြိုက်ကမ္ဘာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်၊ အမြဲလိုလို ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်နေသင့်တယ်ဆိုတဲ့ လွဲမှားတဲ့စိတ်ကူးသာရှိနေတတ်ပါတယ်၊ တော်လှန်ရေးသမားက တစ်ယောက်တည်းအမြင်နဲ့ သူ့အတွက်ပဲ မတွေးပါဘူး၊ ကမ္ဘာထဲက လူတွေအားလုံးအတွက် လေးလေးစားစား ရှိတယ်၊ ဖြန့်ကျက်တွေးပါတယ်၊ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာ၊ နေသာတဲ့နေရာဖြစ်လာဖို့ပဲ အမြဲကူညီနေလေ့ရှိပါတယ်။
အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဘာကြောင့်အကြမ်းဖက်တာလဲ .. ဘယ်လိုအကြမ်းဖက်တာလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းနေပါတယ်။
အကြမ်းဖက်သမားတွေ ... ဘာကြောင့် ... ဘယ်လို ...
ယူအက်စ် - ၁၈၆၅-၁၈၇၇ခုနှစ် - ငွေဝယ်ကျွန်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့တွဲဖက် ပြည်သူ့သမ္မတပါတီဝင် ၃၀၀၀ကျော် ကို Ku Klux Klan၊ အဖွဲ့သားတွေနဲ့ ဒေသခံလူဖြူအကြမ်းဖက်သမားအစုအဖွဲ့တွေ သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်၊ Ku Klux Klan၊ The Klan ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး KKK လို့လည်း လူသိများကြတယ်၊ ခေတ်သုံးခေတ်နဲ့ KKK အဖွဲ့အစည်း အားကြီးခဲ့ကြတယ်၊ သူတို့ရဲ့အ၀တ်အစားက အဖြူရောင်ကတော့ပုံ ခေါင်းဆောင်းမျက်နှာဖုံးနဲ့ အဖြူရောင်ခြုံထည်ပါပဲ၊ လူဖြူ၊ လူမည်းကိစ္စတွေမှာလည်း ပါဝင်ခဲ့တယ်၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြတယ်။
ရုရှားအင်ပါယာ - ၁၈၈၁ ခုနှစ် - Narodnaya Volya(လူများရဲ့စိတ်ဆန္ဒ)လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ရုရှားနိုင်ငံရဲ့ ဘုရင်အလက်ဇန်းဒါး II ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့မှုမှာ နာမည်ကြီးပါတယ်၊ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းဟာ ပြည်သူကိုယ်စားပြုဖို့ ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့ကြွေးကြော်တယ်၊ လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောခွင့်/ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခွင့်/ စုရုံးခွင့်တွေကိုတောင်းဆိုတယ်၊ ပြည်သူကိုယ်စားပြု ကိုယ်ပိုင်အစိုးရ တောင်းဆိုတယ်၊ စစ်တပ်ကိုပြည်သူ volunteer တွေနဲ့ပါဝင်ဖွဲ့ထားတဲ့ အမြဲတမ်း စစ်တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုတယ်၊ ဘုရင် အလက်ဇန်းဒါး II ဟာ ပိုလန်နိုင်ငံဘုရင်၊ ဖင်လန်နိုင်ငံမြို့စားလည်းဖြစ်တယ်။
ဆွဇ်ဇာလန် - ၁၈၉၈ စက်တင်ဘာ ၁၀ရက် - သြစတီယားဧကရီ၊ ဟန်ဂေရီဘုရင်မ Elisabeth of Bavaria ကို မင်းမဲ့ဝါဒီသမား လူအီဂျီလာချီနီဆိုသူ က ဆွဇ်ဇာလန်မှာ ချွန်ထက်တဲ့ဓါးနဲ့ နှလုံးတည့်တည့်ထိုးစိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်၊ သူ တကယ် သတ်ဖြတ်လိုတာက ဘုရင်ကို လို့ဆိုတယ်၊ သြစတြီးယား-ဟန်ဂေရီ နှစ်နိုင်ငံဘုရင် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အတွင်း သမိုင်းဝင် အမှတ်တံဆိပ်ပမာ နာမည်ကျော်လှတဲ့ မင်းသမီးပါ၊ ဘိုဟီးမီးရားဘုရင်မ၊ ခရိုအေးရှားဘုရင်မလို့လည်း နာမည်ကြီးလှပါတယ်။
မော်ရိုကို - ၁၉၀၄ မေ ၁၈ရက် - ဂရိ-အမေရိကန်လူချမ်းသာကြီးအိုင်ယွန်ပါးဒီကားရစ်နဲ့ ခရွမ်းဝဲလ်ဗာလီဟာ မော်ရိုကိုမှာ ပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတယ်၊ ပြန်ပေးဆွဲသူ ရေဆူလီအာရပ်ဘ်လူမျိုးစုဝင် ရေဆွန်နီက အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝကြတဲ့ ဆူလ်တန်ဘုရင်နဲ့ မော်ရိုကိုတော်ဝင်မျိုးဆက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Mulai Abd al-Aziz IV တို့ ဆီက ပြန်ပေးငွေ ဒေါ်လာ ၇သောင်း တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ရုရှား -၁၉၀၄ ဇွန် ၁၆ရက် - ရုရှားဘုရင်ခံဗိုလ်ချုပ် နီကိုလိုင်အီဗန်နိုဗစ်ခ်ျဘော့ဘရီကောဗ့်ကို ဖင်လန်နိုင်ငံသား အမျိုးသားဝါဒီသမား ယူဂျန်ရှောန်မန်းက ဖန်လန်နိုင်ငံ၊ ဟဲလ်စင်ကီးမြို့တော်လွှတ်တော် အဆောက်အဦးမှာ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဘော့ဘရီကောဗ့်ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုဟာ ဖင်လန်နိုင်ငံရေးသမားတွေအကြား မေးခွန်းထုတ်စရာ ထိပ်ဆုံးကကိစ္စရပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ရှောန်ကို ဒီနေ့အထိဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့သူရဲကောင်းအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ထားကြဆဲပါပဲ။
သြစတြီးယား-ဟန်ဂေရီ ၁၉၁၄ ဇွန် ၂၈ ရက် - သြစတြီးယားဂရန်းမြို့စားကြီး ဖရန့်ဇ်ဖာဒီနန်နဲ့ ဇနီးသည်တို့ဟာ ဆာရာယေဗိုမြို့မှာလုပ်ကြံခံခဲ့ရတယ်။ ဘောစ့်နီးယား-ဟာဇီဂိုးဗီးနားဆေးရုံဖွင့်ပွဲတစ်ခုကို ဧည့်သည်တော်အဖြစ် တက်ရောက်ကြချိန် ကားနဲ့အလာ လမ်းမှာပဲ Young Bosnia အဖွဲ့ဝင်လူငယ် နဲလ်ဒဲရ်ကိုချာဗရီနိုဗစ်က လက်ပစ်ဗုံး တစ်လုံးကို မြို့စားကြီးရဲ့ကားထဲအရှိန်နဲ့ ပစ်သွင်းလိုက်ပါတယ်၊ ဗုံးက ၁၀စက္ကန့်နောက်ကျသွားပြီး နောက်ကားတစ်စင်းရဲ့ ဘီးနားမှာပေါက်ကွဲသွားခဲ့တယ်၊ ဒဏ်ရာရသူတွေရှိခဲ့တယ်၊ အဲဒီလူငယ်က အသင့်ယူလာတဲ့ ဆိုင်ယာနိုက်အဆိပ်ဆေးပြားကို မျိုချပြီး မြစ်ထဲခုန်ဆင်းပေမဲ့ ဆေးပြားကရက်လွန်နေသလို မြစ်ကလည်း မနက်ခဲ့ပါဘူး၊ အဲဒီလူငယ်ကို ရဲကဖမ်းမိခဲ့တယ်၊ မြို့စားကြီးက လွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်၊ သူ အော်ဟစ်ပါတယ်၊ “ဧည့်သည်တွေကို ဗုံးနဲ့ဧည့်ခံသလား” လို့ တာဝန်ရှိသူတွေကို ကြိမ်းမောင်းခဲ့တယ်၊ ဒဏ်ရာရသူတွေကို ကြည့်ရှုဖို့ ဆေးရုံကိုဆက်ပြီးအသွားမှာ ကားမောင်းသူရဲ့လမ်းအရွေးမှားမှုကြောင့် လမ်းခုလတ်မှာ လုပ်ကြံသူတွေ အကြံအထမြောက်စေဖို့ ဖြစ်သွားခဲ့တယ်၊ Young Bosnia နဲ့ Black Hand အဖွဲ့သား နောက်ထပ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အသက်၁၉နှစ်အရွယ် ဆားရ်ဘီးယန်းလူမျိုး ဂါဗရီလိုပရင်စီးပ်ဟာ FN Model 1910၊ .32 ACP အိပ်ဆောင် ပစ်စတိုသေနတ်နဲ့ ဖရန့်ဇ်ဖာဒီနန်ရဲ့လည်ပင်း၊ ဇနီးဆိုဖီရဲ့ဝမ်းဗိုက်ပိုင်းတွေပစ်ခတ်ခဲ့တယ်၊
ကယ်ဆယ်ဖို့လူတွေရောက်လာတဲ့ အချိန်ထိ ဖရန့်ဇန်ဖာဒီနန် အသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်ပြီး ဇနီးသည်ကို “ဒါလင် သေလို့မဖြစ်ဘူး၊ ငါတို့ကလေးတွေအတွက် အသက်ရှင်ပေးပါ” လို့ တဖွဖွ ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်၊ မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သူ သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး ဆိုဖီကတော့ ဆေးရုံ အသွားလမ်းခုလတ်မှာပဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်၊ ပရင်စီးပ်လည်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ သေနတ်ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်က ဆွဲယူသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီး ပထမလူငယ်လိုပဲ ဆိုင်ယာနိုက်ဆေးပြား မျိုချခဲ့တယ်၊ ပျို့အန်ခဲ့တာနဲ့ မသေခဲ့ပါဘူး၊ ပရင်စီးပ်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့ပြီး သေဒဏ်ပေးဖို့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့အတွက် ထောင်ဒဏ် နှစ်၂၀ အမြင့်ဆုံးပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ပြီး ၃နှစ်နဲ့ ၁၀လ အကြာ တဲရဲဇင်ထောင်ထဲမှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီဖြစ်ရပ်ဟာ ပထမကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားဖို့ သေနတ်မောင်းဖြုတ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုအဖြစ် သမိုင်းမှာ နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားခဲ့ရတယ်။
ယူအက်စ် - ၁၉၂၀ စက်တင်ဘာ ၁၆ရက် - wall street ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုပါ၊ နယူးယောက်မြို့တော်ရဲ့ စီးပွားရေး ရပ်ကွက် FiDi မှာ နေ့လည် ၁၂ နာရီ ၁မိနစ် က ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်၊ ၃၈ ဦးသေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၃၀၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအများစုမှာ အီတလီမင်းမဲ့ဝါဒီသမားတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုလို့ ယူဆခဲ့ကြပြီး ၂၉ယောက်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတ ၀ါရင်းဂျီဟားဒင်းလက်ထက်မှာတော့ ဆိုဗီယက်က ကြိုးကိုင်ခိုင်းစေခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်၊ နောက်တော့ ကွန်မြူနစ်ပါတီ USA လုပ်တယ်လို့ နာမည်တပ်ပြန်တယ်၊ ၁၉၄၄ ခုနှစ်မှာ ဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗျူရိုရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာ ယူနီယံရုရှားအလုပ်သမားအဖွဲ့၊ IWW၊ ကွန်မြူနစ် စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေလို့ ယူဆကြတယ်၊ နောက်ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာတော့ အီတလီမင်းမဲ့ဝါဒီသမားတွေ ဒါမှမဟူတ် အီတလီအကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဗြိတိသျှအမိန့်အရပါလက်စတိုင်း - ၁၉၂၀-၁၉၄၈ - ၁၉၂၀ ပါလက်စတိုင်းအဓိကရုဏ်း(Nabi Musa အဓိကရုဏ်း)လို့ နာမည်ကြီးပါတယ်၊ အဲဒီအဓိရုဏ်းဟာ ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့တည်ရှိမှုမှာ ၂၈နှစ်ကြာ အကြီးအကျယ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။
King David Hotel after Bombing
၁၉၄၆ ဇူလိုင် ၂၂ရက်နေ့ မှာ ဂျေရုစလင်မြို့တော် King David ဟိုတယ်မှာ ဂျူးအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ဇီယွန်နစ်နဲ့ မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းအားဂန်တို့က ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီဟိုတယ်ဟာ ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိသျှ စစ်တပ်ရုံးချုပ်ရုံးစိုက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်၊ ဗြိတိသျှတပ်သား ၉၁ယောက်နဲ့ အရပ်သားသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်။
ယူအက်စ် ၁၉၄၀-၁၉၅၆ - ဂျော့ခ်ျမက်တက်စကီးဟာ “ဗုံးခွဲအရူး” လို့ နာမည်ကြီးတယ်၊ အဲဒီ ဗုံးခွဲအရူး မက်တက်စကီးဟာ နယူးယောက်မြို့တော်မှာ ၁၆ နှစ်လုံးလုံး ပြဇာတ်ရုံ၊ စာကြည့်တိုက်၊ လေဆိပ်၊ ကားဂိတ်၊ ရထားဂိတ်၊ အစိုးရရုံးတွေမှာ ဗုံးပေါင်း ၃၀ကျော် တစ်ယောက်တည်း လှည့်ပြီးခွဲနေခဲ့ပါတယ်၊ မက်တက်စကီးဟာ ကုမ္ပဏီပေါ်မှာ မုန်းတီးခဲ့တဲ့ စိတ်အခံကြောင့် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ၊ ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးတဲ့နောက် ယူအက်စ်ရေတပ်ထဲဝင်ခဲ့ပြီး လျှစ်စစ်ကျွမ်းကျင်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ နောက် ဇာတိကိုပြန်ခဲ့ပြီး ယူအက်စ်ရဲ့ အကြီးဆုံးလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ ConEdison မှာ စက်ပြင်ဆရာအဖြစ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘွိုင်လာအိုးပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့် အဆုတ်ထဲ အငွေ့တွေဝင်ရောက်ကာ အလုပ်မှ လစာနဲ့ ၂၆ပတ်ခန့် နားနေခဲ့ရတယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီအလုပ်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်၊ အလုပ်မှ ထိခိုက်မှုကြောင့် နမိုးနီးယားရခဲ့ပြီး တီဘီရောဂါဆက်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်၊ အလုပ်သမားလျော်ကြေးအတွက် တိုင်ကြားတောင်းခံခဲ့ပေမဲ့ ကုမ္ပဏီက ငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ConEdison ကုမ္ပဏီကိုအလွန်အမင်းမုန်းတီးခဲ့တယ်၊ ပထမဆုံးဗုံးကို ၁၉၄၀ နိုဝင်ဘာ ၁၆ရက်နေ့မှာ ConEdison ပင်မလျှပ်စစ်ဌာနမှာ ချထားခဲ့တယ်၊ နောက်ပိုင်းမှာ ဗုံးခွဲမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ခဲ့တယ်၊ သတင်းစာတိုက်တွေကိုပါ ခြိမ်းခြောက်စာတွေ ရေးသားခဲ့တယ်၊ ၁၉၄၁ ဒီဇင်ဘာမှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲ အမေရိကန်ပါဝင်လာခဲ့တော့ ရဲဌာနကို စာလုံးမဲကြီးတွေနဲ့စာရေးပို့ခဲ့ပါတယ်၊ “စစ်ပွဲအတွင်း ကျွန်တော် ဗုံးတွေကို ပြုလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကျွန်တော့်ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်က ဒီလိုဆုံးဖြတ်ဖို့ ခိုင်းစေခဲ့တာဖြစ်တယ်၊ စစ်ပွဲပြီးရင်တော့ ConEdison ကို တရားမျှတတဲ့ဘက်ရောက်စေဖို့ ကျွန်တော်ပြန်လာဦးမယ်၊ သူတို့ရဲ့ တာဝန်မဲ့တဲ့လုပ်ရပ်အတွက် သူတို့ပြန်ပြီးပေးဆပ်ရဦးမှာပဲ. F.P” လို့ ရေးသားခဲ့တယ်၊ အမှုပေါင်း ၄၇မှုနဲ့ တရားစွဲခံရတယ်၊ သူ့ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်စာတိုင်းမှာ F.P လို့ အဆုံးသတ်ရေးထားတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စုံထောက်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါ သူက Fair Play ပါလို့ ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်၊ နယူးယောက် Fishkill Correctional Facility အကျဉ်းထောင်မှာ အကျဉ်းကျခံရပြီး ၁၉၇၃ မှာ Creedmoor စိတ်ရောဂါကုစင်တာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်၊ အဲဒီနှစ်မှာပဲ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့တော်ဝန်၊ ရဲဌာနနဲ့ သတင်းစာတိုက်တွေဆီကို စာပေါင်း ၉၀၀ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်၊ အကျဉ်းထောင်ကလွတ်လာခဲ့ပြီး နှစ်၂၀ အကြာ အသက် ၉၀ မှာ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ဆီးရီးယား ၁၉၄၉ သြဂုတ် ၅ ရက် - ဇူလိုင်လ ၂၀ရက်နေ့က လူစန်းညီလာခံမှာ အစ္စရေး-ဆီးရီးယားတို့ ၁၉၄၉ စစ်ပြေငြိမ်းရေးသဘောတူညီချက် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပြီးတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်စွာပဲ အနောက်နိုင်ငံဆန့်ကျင်ရေး အမျိုးသားအင်အားစုတွေက ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးအတွက် ပိုမိုလှုပ်ရှားလာပြီး ဒမတ်စ်စကပ်မြို့တော် မနောရှားဆီးနဂေါန် ဂျူးရပ်ကွက်ထဲကို လက်ပစ်ဗုံးမြောက်များစွာပစ်သွင်းခဲ့တယ်၊ ဂျူးလူမျိုး၊ ကလေးငယ်တွေအပါအ၀င် ၁၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၃၀ခန့် ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်။
ဆိုက်ပရပ်စ် ၁၉၅၆ ဇွန် ၁၆ ရက် - ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံ၊ မြို့တော် နီကိုစီးရာမှာ လူတစ်ဦးက ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့် ၆ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်၊ နီကိုစီးရာဟာ တူရကီပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ဆိုက်ပရပ်စ် ဖြစ်ပြီး ဆိုက်ပရပ်ကျွန်းဟာ အဲဒီအချိန်က ဂရိဆိုက်ပရပ်စ်နဲ့ တူရကီဆိုက်ပရပ်စ်ဆိုပြီး မြောက်ပိုင်း၊ တောင်ပိုင်း ၂ပိုင်းကွဲခဲ့ပါတယ်။
လက်ဘနွန် ၁၉၅၈ သြဂုတ် ၁၅ရက် - မြို့တော်ဘေရွတ်မှာ ဗုံးတစ်လုံးခွဲခဲ့ပြီး လူ ၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီဗုံးကြောင့် ၁၀ဦးခန့် ထပ်မံဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး အဲဒီနေ့က အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ အဆုံးသတ်စေရေးအတွက် ယူအန်အထွေထွေအစည်းအဝေးမှာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာနေကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။
ဗီယက်နန် - ၁၉၆၅ ဇွန် ၂၆ ရက် - ဟိုချီမင်းမြို့တော် ဆိုင်ဂုံမြစ်ထဲက ရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်မှာ ၂ ကြိမ် ဗုံးခွဲပါတယ်၊ ပထမတကြိမ်မှာ လူပေါင်း ၂၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ဒုတိယအကြိမ်ဗုံးကွဲချိန်မှာ အမေရိကန်အမျိုသမီးတစ်ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်၊ လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ဂရိ - ၁၉၆၇ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် - ရိုဒေါစ့်ဂရိကျွန်းအနီး British European Airways Flight 284 ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး မြေထဲပင်လယ်ထဲကို ပျက်ကျခဲ့တယ်၊ ခရီးသည်တွေနဲ့ လေယာဉ်အမှုထမ်း ၆၆ ဦးလုံး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်၊ ခရီးသည်တစ်ယောက်ရဲ့ထိုင်ခုံအောက်မှာ စစ်တပ်သုံးပလပ်စတစ်ဗုံးနဲ့ ခွဲခဲ့တာကို စစ်ဆေးသိရှိခဲ့ကြတယ်။
ဒီအကြမ်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ ၁၉ရာစု/၂၀ရာစု တွေရဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပါ၊ ဒီဘက်ရာစုနှစ်တွေမှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုစာရင်းတွေ နိုင်ငံအ၀ှမ်းအများကြီးပဲဖြစ်လို့နေပါပြီ၊ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဘာကြောင့် ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာနည်းနည်းပါးပါး သိရပြီးတဲ့အခါ တော်လှန်ရေးသမားတွေရဲ့ ဘာကြောင့် ... ဘယ်လို ... ဆိုတာလည်း ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်၊
တော်လှန်ရေးသမားတွေ ... ဘာကြောင့် ... ဘယ်လို ...
၁၆ရာစုက ဂျာမန်ဘုန်းကြီး၊ ဘာသာရေးပညာ ပရော်ဖက်ဆာ မာတင်လူသာ ဟာ ပရိုတက်စတင့် ပြန်လည်ပုံသွင်းခြင်း စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်၊ ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ အပြစ်သားတွေကို ဘုရားသခင်အပြစ်ပေးခြင်း (ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတွေမှာ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှလွတ်ကင်းစေခြင်း)ကို စတင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်၊ ၁၅၁၇ ခုနှစ်မှာ The Ninety-Five Theses ကျမ်းစာကိုရေးသားခဲ့တယ်၊ အဲဒီကျမ်းဟာ နောက်ပိုင်းမှာ ဥရောပရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့အမွေအနှစ်တွေထဲက အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် ဂုဏ်သရေရှိရှိကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Luther's Large Catechism/ Luther's Small Catechism/ On the Freedom ofaChristian စာအုပ်တွေကိုလည်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
အိုလီဗာခရွမ်းဝဲလ် (ဧပြီ ၂၅ ၁၅၉၉ - စက်တင်ဘာ ၃ ၁၆၅၈) - အင်္ဂလန်နိုင်ငံကို ရီပတ်ပလီကန် ဓနသဟာယနိုင်ငံဖြစ်လာစေဖို့ စတင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ အင်္ဂလိပ်စစ်သား၊ နိုင်ငံရေးသမားခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အဖြစ် ကျော်ကြားပါတယ်၊ သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ဟာ အိုင်ယာလန်နဲ့ ယူကေနှစ်နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရန်ငြိုးတွေကနေအကြောင်းရင်းတစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့တယ်၊ အင်္ဂလိပ်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအတွင်း ပါလီမန်အမတ် တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ New Model Army မှာ စစ်ဗိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊ အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်နဲ့ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရဲ့ ဗြိတိသျှဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေအရ ပေါ်ထွက်လာခဲ့တဲ့ Lord Protector ဘွဲ့ရခဲ့တယ်။
ကလောဒီဖိုရှေး(စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် ၁၇၄၄- အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက် ၁၇၉၃) ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်တစ်ဦးပါ။
မက်ဇီမီလိန်းရုဘ်စပီးရဲ (မေ ၆ရက် ၁၇၅၈ - ဇူလိုင် ၂၈ ၁၇၉၄) - ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးမှာ နာမည် အကျော်ကြားဆုံးနဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးပုံရိပ်တွေထဲက တစ်ဦးဖြစ်တယ်၊ ၁၈ရာစုအတွင်းက ပညာအလင်း ဖြန့်ဝေပေးခဲ့တဲ့ ဒဿနိက ပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဂျီးန်ဂျက်ရူးဆိုးနဲ့ မွန်းတက်စ်ခရူးတို့ရဲ့အသိအမြင်ဒဿန လွှမ်းမိုးပါတယ်။
မဟတမဂန္ဓီ (အောက်တိုဘာ ၂ ရက် ၁၈၆၉ - ဇန်န၀ါရီ ၃၀ ရက် ၁၉၄၈) - အိန္ဒိယနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေ အတွက် လုပ်ဆောင်ရာမှာ နူးညံ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုအသွင် ဖော်ဆောင် ခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေဖခင်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်၊ အိန္ဒိယအမျိုးသားအကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိသူ ဟိန္ဒူအမျိုးသားဝါဒီ နက်သူရမ်ဂေါ့ဒ်စီက အီတလီလုပ် .၃၈ အော်တိုသေနတ်နဲ့ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။
မာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာ (ဇန်န၀ါရီ ၁၅ရက် ၁၉၂၉ – ဧပြီ ၄ရက် ၁၉၆၈) - အမေရိကန်ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ၊ တော်လှန်ရေးသမား၊ အထူးသဖြင့် အာဖရိကန်-အမေရိကန်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်လှုပ်ရှားခဲ့သူ၊ ထင်ရှားတဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပါ၊ မဟတမဂန္ဓီရဲ့သွန်သင်ဆုံးမမှုတွေကိုလိုက်နာခဲ့ရင်း အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လှုပ်ရှားခဲ့သူအဖြစ် ယူအက်စ်အတွက်၊ တကမ္ဘာလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ၁၉၆၈ ဧပြီ ၄ရက်နေ့မှာ တန်နက်ဆီပြည်နယ် မမ်းဖစ်မြို့တော်မှာလုပ်ကြံခံခဲ့ရပါတယ်၊ ကင်းရဲ့ အားထုတ်မှုတွေထဲမှာ ဆင်းရဲငတ်မွတ်မှုအဆုံးသတ်ရေးနဲ့ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးမှာအတွက်လည်း ဦးတည်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။
မော်စီတုန်း (ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက် ၁၈၉၃- စက်တင်ဘာ ၉ ရက် ၁၉၇၆) ဟန်တရုတ်တော်လှန်ရေးသမား၊ နိုင်ငံရေးသမား၊ ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်တယ်၊ ၁၉၄၉ ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ People's Republic of China (PRC) ကို သေဆုံးတဲ့အချိန်ထိ ဦးဆောင်ခဲ့တယ်၊ မော်စီတုန်းရဲ့ မာစ့်-လီနင်ဝါဒပါဝင်တဲ့အယူအဆ၊ စစ်ဗျူဟာတွေနဲ့ ကွန်မြူနစ်လမ်းစဉ်တွေကိုစုပေါင်းပြီး အခုအခါ မော်ဝါဒလို့ ခေါ်ဆိုကြတယ်၊
မော်စီတုန်း ရေးသားခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေက -
• On Guerrilla Warfare 1937
• On Practice 1937
• On Contradiction 1937
• On Protracted War 1938
• In Memory of Norman Bethune 1939
• On New Democracy 1940
• Talks at the Yan'an Forum on Literature and Art 1942
• Serve the People 1944
• The Foolish Old Man Who Removed the Mountains 1945
• On the Correct Handling of the Contradictions Among the People 1957 တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
တော်လှန်ရေးသမားတွေထဲမှာထင်ရှားတဲ့ အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေကပါ အင်မတန်လေးစားကြတဲ့ ချေဂေးဗားရာကို ချန်ထားလို့မရပါဘူး၊ ချေဂေဗားရာဟာ မာစ့်ဝါဒီတော်လှန်ရေးသမားပါ၊ ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှာ မော်တာတစ်လုံး ကိုယ်တိုင် တပ်ဆင်ထားတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်နဲ့ မြောက်ပိုင်းအာဂျင်တီးနား ၄၅၀၀ကီလိုမီတာခရီးရှည်ကို တစ်ကိုယ်တည်း ထွက်ခဲ့တယ်၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှာ မြောက်အမေရိကပြည်နယ်တွေဆီ ၈၀၀၀ကီလိုမီတာခရီးနှင်ခဲ့တယ်၊ အဲဒီခရီးစဉ်တွေက လက်တင်အမေရိကရဲ့ လက်ရှိစီးပွားရေး အခြေအနေတွေသိမြင်လာခဲ့ပြီး သူရဲ့အတွေးအမြင်တွေကို အခြေခံကျကျ ပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတယ်၊ ယူအက်စ်က အထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့ အာဏာရှင်ကျူးဘားသမ္မတ ဖူလ်ဂျန်ဆီယို ဘက်တစ်စတာကိုဆန့်ကျင်တဲ့ ကျူးဘားတော်လှန်ရေး(၁၉၅၉ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်)မှာ အဓိကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဖီလ်ဒဲကက်စရိုကလည်း အဲဒီ ကျူးဘားတော်လှန်ရေးကို ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ခေါင်းဆောင်ထဲကတစ်ဦးပါပဲ၊ ချေဂေးဗားရာရဲ့ “The Motorcycle Diaries” မှတ်စုဟာ နောက်ပိုင်းမှာ နယူးယောက်တိုင်းမ်ရဲ့ အရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့စာအုပ် ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ တိုင်းမ်မဂ္ဂဇင်းကြီးက ၂၀ရာစုရဲ့အလွှမ်းမိုးဆုံး၁၀၀ထဲက တစ်ဦးလို့ ချေဂေးဗားရာကို အမည်တပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျူးဘားဓါတ်ပုံဆရာအဲလ်ဘာ့တိုကော်ဒါရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “သူရဲကောင်းပြောက်ကျားတပ်သား”(Guerrillero Heroico) လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ဓါတ်ပုံဟာ ကမ္ဘာမှာအကျော်ကြားဆုံးဓါတ်ပုံအဖြစ် ကြေညာခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်၊ ၁၉၆၀ခုနှစ် ဟာဗားနားဆိပ်ကမ်းမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့စဉ် ချေဂေးဗားရာရဲ့ ရုပ်သွင်ကို ကော်ဒါ .. လျှပ်တပြက်ရိုက်ကူးခဲ့တယ်၊
ကော်ဒါ က ပြောခဲ့တယ် ...
“အဲဒီပုံမှာ ချေဂေးဗားရာရဲ့ “ဒေါသနဲ့နာကျင်မှု” ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်” တဲ့ ...
Ref : http://www.differencebetween.net/miscellaneous/politics/difference-between-revolutionist-and-terrorist/
မော်နီတာဂျာနယ် အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂၇)
1:43 AM ပင်ကိုရေးဆောင်းပါး, ဂေးများရဲ့စီတန်းလှည့်လည်မှု6comments
အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက် မတိုင်ခင် တစ်ပတ်အလိုကတည်းက တီဗီ၊ ရေဒီယို၊ သတင်းဂျာနယ်တွေမှာ ဂေးပရိတ် ပြုလုပ်မယ့်အစီအစဉ်ကို ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒီနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာ ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လိုသူ တွေရဲ့ စာတမ်းတွေ၊ နံရံကပ်ကြော်ငြာတွေ ဘဲလ်ဂရိတ် လမ်းတွေရဲ့ အဆောက်အဦးနံရံတွေမှာ ဟိုဟိုဒီဒီ တွေ့လာခဲ့ရပြီ၊ တစ်ချို့စာတမ်းတွေမှာ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရမယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်သံတွေပါ ပါလာကြတယ်၊ “ဂေးစီတန်းလှည့်သူတွေ .. ငါတို့တွေ မင်းတို့အတွက် စောင့်နေတယ်” ၊ “ဟိုမိုဆက်ရှယ်တွေသို့ သေခြင်းတရား”၊ “ဂေးတွေကိုမီးလောင်ကျွမ်းစေမယ်” စတဲ့ စာတမ်းတွေကို နံရံဆေးပန်းချီဆန်ဆန် နံရံတွေမှာရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်၊ “ဆားရ်ဘီးယားမှာ ဥပဒေနဲ့ အမိန့်အာဏာလေးစားမှုရှိပါလိမ့်မယ်” ဆားရ်ဘီးယားသမ္မတ တားဒစ်ခ်ျ က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
“ဂေးတွေကို မီးရှို့မယ်” ဆိုတဲ့စာတမ်း
ဒါပေမဲ့ ဆားရ်ဘီးယားရဲ့ ဂေးစီတန်းလှည့်လှည်မှု ရာဇ၀င်ကိုပြန်ကြည့်ရရင် နည်းနည်းတော့ ကြောက်လန့်စရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ၂၀၀၁ ခုနှစ် မတ်လမှာ ပထမဆုံး ဂေးစီတန်းလှည့်လည်မှု လုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ လူသေဆုံးတဲ့အထိ မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ သွေးထွက်သံယို ဒဏ်ရာရမှုတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပါတယ်၊ အဲ့ဒီနေ့က အဖြစ်အပျက်တွေကို သတင်းဌာနတွေက လွှင့်ထုတ်ခဲ့ကြတော့ တကမ္ဘာလုံးက ကြောက်စရာပုံရိပ်တွေကို မြင်တွေ့သိရှိသွားခဲ့ကြတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှာ နောက်ထပ် စီတန်းလှည့်လည်ဖို့လုပ်ကြပြန်တယ်၊ အဲဒီဒုတိယအစီအစဉ်က ပျက်သွားခဲ့ပါတယ်၊ ဆားရ်ဘီးယန်းရဲတွေက လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူဖို့ သဘောတူခဲ့ကြတယ်၊ ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သူတွေရဲ့အင်အားအခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ပထမတော့ နေရာပြောင်းပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြသေးတယ်၊ နောက်ဆုံးမှာ လုံခြုံရေးအတွက် အာမခံချက်မရှိတာကြောင့် ဒုတိယ အကြိမ်စီတန်းလှည့်လည်မယ့် အစီအစဉ်ရပ်တန့်ခဲ့ရပါတယ်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ရပ်တန့်လိုက်ရတဲ့ ဂေးစီတန်းလှည့်လည်မှုအပြီး စီစဉ်သူ မားရ်ဒါပူးဝါးချားက ၂၀၀၁ ခုနှစ်ကအဖြစ်အပျက်အကြောင်း ခုလိုပြောပြခဲ့တယ်၊ “၂၀၀၁ ခုနှစ်က ကိစ္စကြီးက တကယ့်ကိုကြောက်စရာကြီးပါ၊ အဲဒီနေ့ က City Center ရင်ပြင်ကိုလာခဲ့တယ်၊ တွေ့လိုက်ရတာ လူတွေကအများကြီးပဲ၊ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတောင် မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲ၊ အဖြစ်အပျက်တွေကမြန်လွန်းတယ်၊ လူတစ်ယောက် မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုဆွဲခေါ်လာပြီး ကျွန်တော်ရှေ့မှာတင်ပဲ လက်သီးနဲ့ထိုးနေခဲ့တယ်၊ ရဲက နှစ်ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာရပ်နေတယ်၊ ရေခဲမုန့်စားမပျက်ဘူး၊ ဘာမှလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိဘူး၊ ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကို သံကုန်ဟစ်ပြီးတားတယ်၊ မေးတယ်၊ “ခင်ဗျားဘာကြောင့် ဒီမိန်းကလေးကိုထုရိုက်နေလဲ”လို့ အော်လိုက်တယ်၊ အဲဒီလူပြန်ဖြေတာက သူကမိန်းကလေးတစ်ဦးမဟုတ်ဘူး၊ သူက lesiban တဲ့”၊ လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တွေက ဆားရ်ဘီးယာမှာ အလှမ်းကွာဝေးနေဦးမှာပဲလို့ မားရ်ဒါ က ဆက်ပြီး ပြောပြခဲ့တယ်။
အောက်တိုဘာ ၉ရက် စနေ့နေ့က အန်တီဂေးပရိတ် ကိုလည်း လူပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာက ရင်ပြင် ရှေ့မှာ ပါဝင်စီတန်း လှည့်လည်ခဲ့ကြတယ်၊ ကလေးငယ်တွေအများကြီးပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ဂေးတွေကို ဆန့်ကျင်သူတွေက လက်တွန်းလှည်းနဲ့ တွန်းရလောက်အထိ ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးငယ်တွေကို ဆန္ဒပြပွဲထဲဆွဲခေါ်လာခဲ့ကြတယ်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဂေးပရိတ် အတွက် ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီကို ဦးဆောင်သူ သမ္မတ ဘောရစ်တားဒစ်ခ်ျက ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၅၀၀၀ခန့် အသုံးပြုကာကွယ် ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်မှာတော့ အားလုံးက စိတ်ပူပင်နေခဲ့ကြတဲ့အချိန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ရဲ့ လမ်းဆုံတိုင်းမှာ ရဲ ၃ယောက်ခန့်ချထားပြီး၊ City Center မှာတော့ ရဲတပ်သားတွေထူထပ်စွာချထားပါတယ်၊ အဲဒီရင်ပြင်ရှေ့ အမြင့်ဆုံး အဆောက်အဦးရဲ့ အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ စတူဒီယိုဘီ အသံလွှင့်ဌာနရှိနေတယ်၊
သတင်းဌာနက ကင်မရာတွေအသင့်ပြင် ထားကြပြီးပြီ၊ စီတန်းလှည့်လည်မဲ့ ဂေးအခွင့်အရေးလုပ်ရှားသူ ၁၀၀၀ခန့်နဲ့၊ သူတို့ကိုအထောက်အပံ့ပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့လည် ပန်းခြံမှာ စုစည်းခဲ့ကြတယ်၊ ဒိုင်း၊ ကျည်ကာဝတ်စုံပြည့် ရဲတပ်သားတွေနဲ့ ရဲကားတွေက ၀န်းရံထား ပေးကြပါတယ်၊ မြင်းစီးရဲတပ်သားတွေလည်းလှည့်လည်နေကြတယ်၊ ဆားရ်ဘီးယားဆိုင်ရာ အီးယူအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် မစ္စတာ ဗင်းဆင့်ဒီဂါထ့်က “ကျွန်တော်တို့ဟာ သည်းခံခြင်းတရားတန်ဘိုးနဲ့၊ လွတ်လပ်မှုကိုဖော်ပြချင်လို့ ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီး ဒီအခမ်းအနားမျိုးကိုကျင်းပပါတယ်” လို့ လူစုလူဝေးကြီးကို ပြောခဲ့တယ်၊ ရင်ပြင်ရှေ့ကထွက်ခွာပြီး စတင် စီတန်းလှည့်လည်တဲ့ အချိန်မှာ ဂေးပရိတ် ဆန့်ကျင်သူရာပေါင်းများစွာက ဆန့်ကျင်တဲ့စာသားတွေညာသံပေး ရွတ်ဆိုကြကာ စီတန်းလှည့်လည်လာတဲ့ လူတန်းနဲ့ နီးနိုင်သမျှနီးအောင်ကပ်လာခဲ့ကြတယ်၊ ပြီးတော့ ရဲတပ်သားတွေ ထူထပ်အောင်ချထားတဲ့ နဲမာညီနာလမ်းအနီးက မားညဲရ်ပန်းခြံတ၀ိုက်မှာ မီးကျည်တွေနဲ့နေရာပေါင်းစုံကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်၊ ဂေးပရိတ် ကို အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ ရဲတပ်သားတွေကို ဂေးပရိတ် ဆန့်ကျင်သူတွေက ကျောက်ခဲတွေနဲ့ပစ်ပေါက်ကြတယ်၊ လျှစ်စစ်ရထားတစ်စင်းကို မီးရှို့ပြီး ရဲတပ်သားတွေ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို တွန်းချကြတယ်၊ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအစိုးရ အဆောက်အဦးတစ်ခု မီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်၊ လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအဆောက်အဦးနဲ့ RTS အသံလွှင့်ဌာန အဆောက်အဦးတံခါးတွေ ရိုက်ချိုး ဖျက်ဆီးကြတယ်၊ ပုဂ္ဂလိကဆိုင်၂ခု တံခါးတွေဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်၊ တဲရာဇီးယဲလမ်းမ တစ်လျှောက်မှာတော့ အမှိုက်သရိုက်တွေ ပြန့်ကျဲနေခဲ့ပါတယ်၊ မွန်းလွဲပိုင်းလောက်မှာ ဂေးပရိတ် စီစဉ်သူတွေ၊ လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အထောက်အပံ့ပေးခဲ့ကြတဲ့ အီးယူအဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်တွေ၊ သံရုံးအချို့က သံအမတ်တွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြတယ်၊ အဲဒီနေ့က တိုက်ခိုက်မှုမှာ ရဲတပ်သား ၁၂၆ဦး၊ အရပ်သား ၂၆ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်၊ ရဲက ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်သူ ၂၀၇ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အဲဒီညနေမှာပဲ ၁၀၇ဦးကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး ၁၀၀ဦးကိုတော့ ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်၊
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ယဲလီနာထရီဗန်က “အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟာ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမရှိတဲ့လုပ်ရပ်ပါ”လို့ ဆိုတယ်၊ မြို့တော်ဝန်ဒရာဂန်ဂျီးလာစ့်ကလည်း “အဓိကရုဏ်းလုပ်ချင်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဂေးပရိတ်ဟာ ဆင်ခြေတစ်ခုပါပဲ” လို့ ပြောလိုက်တယ်၊ ဂေးပရိတ် ဟာ တကယ်တော့ ဆားရ်ဘီးယားလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်မှု အတိုင်းအတာကို စမ်းသပ်တဲ့စာမေးပွဲတစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတာပါ၊ အဲဒီ စာမေးပွဲရဲ့ အဖြေကတော့ လိင်တူချင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေအပြင်၊ လူလူချင်းအကြမ်းမဖက်၊ ဒီမိုကရေစီအဆင့်အတန်းမြင့်မားတဲ့ လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာဖို့ အစိုးရနဲ့အတူ ဆားရ်ဘီးယားပြည်သူလူထုကပါ ပါဝင်ဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ကြဖို့ လိုနေသေးတယ်ဆိုတာပါပဲ၊ အဲဒီနေ့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ဂေးပရိတ်ရဲ့ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်မှုတွေဟာ ဆားရ်ဘီးယားနိုင်ငံကလိင်တူစိတ်ဝင်စားသူတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဆက်ပြီးမှေးမှိန်စေခဲ့ပါတယ်၊ ကံမကောင်းစွာပဲ လူတစ်ချို့နဲ့ အသက် ၁၄၊ ၁၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေတချို့ဟာ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးတဲ့ အခွင့်အလမ်းကို အသုံးချနေကြတာကို တွေ့ခဲ့ကြရတယ်၊ ကံကောင်းခဲ့တာကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ အသက်သေဆုံးမှုမရှိခဲ့တာပါပဲ၊ သူတစ်ပါးရဲ့အခွင့်အရေးကို ဖျက်ဆီးသူ၊ သူတစ်ပါးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖျက်ဆီးကြသူတွေဟာ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးအောင် ဖျက်ဆီးနေကြသူတွေပဲဖြစ်သွားကြတယ်။
လတ်တလော နိုင်ငံတကာမှာပြုလုပ်မယ့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Gay Parade အစီအစဉ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Montreal6- 12 Oct Black & Blue Festival
Rio de Janeiro 8 - 12 Oct Gay Pride Rio
Belgrade 10 Oct Gay Pride
Shanghai 16 - 31 Oct Shanghai Pride
Los Angeles 17 - 24 Oct Atlantis LA Mexico gay cruise
Berlin 21 - 25 Oct Hustlaball Circuit Party Weekend
Berlin 22 Oct Hustlaball Berlin
Amsterdam 28 - 31 Oct Get Ruff! Leather Pride Weekend
Brussels 29 - 31 Oct La Demence 21th Anniversary Weekend
Hawaii 30 Oct -6Nov RSVP Hawaiian Islands Cruise
Ref : http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11507253